Soo galootigu Sweden waxay soo galiyaan 65 bilyan sanad kasta | Somaliska
Soo galootigu Sweden waxay soo galiyaan 65 bilyan sanad kasta
Warbixin maanta lagu soo daabacay warbaahinta Sweden oo ay sameeyeen khuburo ka tirsan urur lagu magacaabo Arena ayaa lagu soo bandhigay in soo galootigu ay Sweden sanad kasta soo galiyaan 65 bilyan oo karoon oo faa’iido ah. Warbixinta ayaa lagu sheegay in haddii aysan soo galootigu imaan lahayn Sweden uu dhaqaalaha wadanka aad uga hooseyn lahaa heerka uu maanta joogo.
“Warbixinta macnaheedu waa in fikrada SD ee ah in soo galootigu ay qasaare ku yihiin Sweden ay tahay mid been abuur ah” ayuu warbaahinta u sheegay Sandro Scocco oo ka mid ah dadka soo diyaariyay warbixinta,.
Isaga iyo khabiir ka tirsan jaamacada Umeå oo lagu magacaabo Lars Fredrik Andersson ayaa waxay xisaabiyeen dhamaan qarashkii Sweden kaga baxay soo galootiga ilaa sanadkii 1950, iyadoo ay soo baxday in ilaa waqtigaas ay Sweden ka faa’iday qaxootiga lacag ka badan 900 bilyan oo karoon. Waxay sheegeen in bilowga hore laga yaabo in soo galootigu ay dhaqaale kaga baxdo Sweden balse taasi ay tahay maalgashi mustaqbalka ah oo faa’iido laga helayo.
Laanta Socdaalka oo joojineysa qaadashada lacagta cadaanka